भारतमा ब्रिटिस हुँदा निकालिएको नक्सा बाहिरियो विश्व तरंगित , मोदी त’नाबमा! « Swadesh Nepal
भारतमा ब्रिटिस हुँदा निकालिएको नक्सा बाहिरियो विश्व तरंगित , मोदी त’नाबमा!
बिबिसी। भारतले गत हप्ता सार्वजनिक गरेको आफ्नो नक्सामा कालापानी क्षेत्रलाई भारतीय सीमाभित्र राखेपछि नेपालभित्र त्यसको व्यापक वि’रोध भएको छ।
तर नेपाली विज्ञहरू कालापानी क्षेत्र नेपालको भूमि भएको र भारतले ब-लमि-च्या-इँ गरेको बताउँछन्। यसै प्रसङ्गमा नेपालको नापी विभागका भूतपूर्व महानिर्देशक बुद्धिनारायण श्रेष्ठसँग बीबीसी नेपालीले कुराकानी गरेको छ। नेपाल र भारतको सीमा भन्नाले सन् १८१६ मा ब्रिटिश इन्डिया र नेपालबीच भएको सुगौली सन्धिलाई सम्झनुपर्छ।
यो नदीभन्दा पूर्वतर्फ कालापानी पर्छ। यो नक्सालाई मान्दा लिपुलेक, कालापानी सबै नेपालको ठहर्छ। त्यसैगरी सन् १८५६ मा भारतको सर्वेक्षण विभागले नै प्रकाशित गरेको नक्सामा शीर्षक नै ‘नेपाल एन्ड कन्ट्रीज एड्जोइनिङ टु दि साउथ, वेस्ट एन्ड इस्ट कम्पाइल्ड इन द अफिस अफ सभेर्यर जेनरल अफ इन्डिया’ लेखिएको छ।
वर्तमान भारतले ब्रिटिश इन्डियाको वि-रा-सत बोकेको छ। त्यसैले ब्रिटिश इन्डियाले बनाएका आधिकारिक र ऐतिहासिक नक्सा वर्तमान भारतले पनि मान्नुपर्ने हुन्छ।
भारत स्वतन्त्र भएदेखि बनाउँदै गएको नक्सामा कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा भारततिर पारिएको छ। यसलाई आधिकारिक नक्सा मान्न सकिँदैन।
ती दुई वि-वा-दित बनेका सीमाका सम्बन्धमा दुवै देशका परराष्ट्रसचिवले तल्लो तहबाट सहयोग लिएर प्रतिवेदन तयार पार्दै आआफ्नो देशका सरकारलाई बुझाउने भनिएको थियो। उनीहरूले कामको सुरुवात नगर्दै यो नक्सा प्रकाशित हुनु प्रधानमन्त्रीहरूबीच भएको सम्झौताको अ-व-ज्ञा हो।
उससँग प्रमाणका रूपमा उसैले तयार पारेका पुराना दस्तावेज र नक्सा पनि छन्। तर सीमा सिद्धान्तमा त्यसका लागि सरोकार भएका दुवै देश राजी हुनुपर्छ।
सन् २०१५ मा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र चीनका राष्ट्रपति सी जिन्पिङले गरेको एउटा सहमतिमा दुई देशले कालापानीको बाटो प्रयोग गरिने उल्लेख गरिएको थियो।
त्यसप्रति नेपाल सरकारले आ-प-त्ति प्र-क-ट गरेको थियो। तर नेपालको कूटनीतिक अक्षमताले यो विषय सुल्झाउनेगरी काम नभएका हुन्। जेठ २०७२ सालमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिन्पिङसँग बेइजिङमा सीमा व्यापारसम्बन्धी एउटा समझदारी गरेका थिए।
नेपालसँगको सहमतिबिनै गरिएको उक्त सम्झौताबारे नेपालले अ-स-न्तुष्टि व्यक्त गरेको भए पनि कूटनीतिक समाधान खोज्न पर्याप्त अग्रसरता लिएको छैन।
सन् १९६२ मा भारत-चीन यु-द्ध हुँदा भारत प-रा-जि-त भएपछि जब चीन आफ्नो सीमाबारे अडिग रह्यो त्यतिखेर भारतले भविष्यमा यु-द्ध भएमा प्रतिरक्षाका लागि रणनीतिक ठाउँ सोचेर नेपालको भूमिमा पर्ने लिपुलेक घाटीमा क’ब्जा ज-मायो। ल्हासाबाट दिल्ली पुग्ने सबैभन्दा छोटो बाटो पनि त्यही भएकाले चीनले पनि नेपालको पक्षलाई पछिल्ला समय बिर्सने गरेको छ।